Murugo Cusub Oo Man Kaga Soo Korodhay Fashilka Alexis Sanchez Iyo War Farxad Leh Oo Ka Soo Baxaya David De Gea. - Gool24.Net
Murugo Cusub Oo Man Kaga Soo Korodhay Fashilka Alexis Sanchez Iyo War Farxad Leh Oo Ka Soo Baxaya David De Gea.
Manchester United ayaa helaysa warar isku dhaf ah kadib markii uu dhaawac soo gaadhay xidiga kooxdeeda ku fashilmay ee Alexis Sanchez laakiin waxay maamulka United helayaan war farxad leh oo la xidhiidha heshiis korhdintii goolhaye David De Gea.
Alexis Sanchez ayaa dhaawac looga saaray kulankii xalay ee xulkiisa Chile ay guuldarada kal kulmeen Argentina ee kaalinta saddexaad ee Copa America loogu ordayay.
Maamulka Man United ayay dhibaato wayn ku tahay in dhaawac uu soo gaadhay Alexis Sanchez kaas oo qaab ciyaareed fiican ku soo bandhigay Copa America isla markaana sare u soo qaaday sumcadiisii Old Trafford ku burburtay.
Manchester United ayaa raadinaysay koox faraheeda ka saartay Alexis Sanchez laakiin dhaawac soo gaadhay ee xalay looga saaray kulankii Argentina waxa uu sii xumaynayaan fursadii uu xidiga reer Chile kaga bixi lahaa Man United.
Alexis Sanchez ayaa 17 daqiiqo oo kaliya ku jiray kulankii xulkiisa Chile iyo Argentina ku dhex maray Copa America waxayna muujinaysaa xaalada adag ee uu galay waqti uu hamigiisu ahaa in uu ka soo dhex baxo godkii uu ku jiray xili ciyaareedkii la soo dhaafay.
Man United ayaan ilaa hadda wax dalab ah u helin Alexis Sanchez iyada oo mushaarka waalida ah ee uu Man United ka qaato iyo qaab ciyaareedkii musiibada ahaa ee uu Old Trafford kala soo muuqday ay kooxaha cabsi ku rideen.
Laakiin maamulka Man United ayaa war fiican ka helay wakiilka goolhaye David De Gea ee Jorge Mendes kadib markii ay wada xaajoodyo ka yeesheen heshiis kordhinta De Gea ee waqtiga dheer laysku mari waayay.
Dhawaan ayay ahayd markii uu soo baxay in maamulka Man United ay goolhaye David De Gea u soo bandhigeen heshii diid ama qaado ah kaas oo ay ugu sheegeen in uu todobaadkii mushaar ahaan u qaadan doono 350,000 kun oo gini.
Wargayska Daily Mirror ayaa shaaciyay in kadib wada hadaladii wakiilka De Gea ee Jorge Mendes iyo maamulka Man United in goolhayaha reer Spain uu hadda diyaar u yahay in uu saxiixo heshiis cusub oo shan sanadood ah.
Haddii ay Manchester United ku guulaysato in ugu danbayn heshiis cusub oo waqti dheer ah ka saxiixato goolhaye David De Gea waxay guul wayn u noqon doontaa Solskjaer kaas oo ka walwalsan in xidiga reer Spain uu si xor ah ku bixi karo xagaaga soo socda haddii aanu heshiis cusub saxiixin.
Manchester United ayaan dhinaca kale wax xog ah ka ahayn haddii uu Pual Pogba kooxdeeda sii joogi doono waxayna maanta ka walwalsan yihiin haddii uu diyaarada u duulaysa Australia u raaci doono ciyaartoyda kooxdiisa.
Si kastaba ha ahaatee, dhaawaca Sanchez waxa uu maamulka Man United ku yahay dhirbaaxo culus oo kale halka warka De Gea uu u yahay farxad wayn oo ay waqti dheer sugayeen inkasta oo aan wali heshiiskan la dhamaystirin.